ह’त्या हुनुअघि सुजिताले फोनमा भनेकी थिइन्ः कस्तो घरमा विवाह गराइदिएको ? – Taja Khawar
ह’त्या हुनुअघि सुजिताले फोनमा भनेकी थिइन्ः कस्तो घरमा विवाह गराइदिएको ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २८, २०७८ समय: २:०९:०५
महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका ७ भ्रमरपुरा घर भएकी सुजिता ठाकुरलाई उनका श्रीमानको घरका परिवारले अर्कै केटासंग भागेको हल्ला चलाए । घटना भएको दिन सुजिताले आफ्ना बुवालाई फोन गरेर रुँदै मलाई यस्तो घरमा किन विवाह गरेर दिएको भनिन् । उनले बुवालाई फोन गर्दा पछाडी अरु मान्छे ठूलो स्वरमा बोलेको आवाज पनि सुनिन्थ्यो ।
Last Updated on: July 12th, 2021 at 2:09 am